गगन थापा भन्छन्– सिके राउतसँग डराउनुपर्दैन, केपी ओलीबाट नेपाललाई खतरा छ – Kathmandutoday.com
गगन थापा २०७४ वैशाख १४ गते २१:४६ मा प्रकाशित
धर्मको नाममा राजनीति भइरहेको छ । हामी देख्छौं धर्मका नाममा कतिपय देशहरु जलिरेहका छन् । मन्दिरमा भएको मुर्ति बेच्नेहरु तपाईंहरुको बीचमा आएर भन्छन् हाम्रो धर्म खतरामा छ । हामी धर्म जोगाउँछौं भन्छन् । आफ्नो पार्टीको भन्सार भर्नका निम्ति देशको मान र प्रतिष्ठा बेच्नेहरु तपार्इं हाम्रो बीचमा आएर भन्छन् यो राष्ट्रियता खतरामा छ । हामी जोगाउँछौ । अनि हामी कहिलेकाहीं बरालिन्छौं । लाग्छ हाम्रो धर्म खतरामा छ । लाग्छ हामीलाई हाम्रो राष्ट्र खतरामा त छैन ? तिनले हाम्रो राष्ट्र जोगाइदिन्छन् । तिनले हाम्रो धर्म जोगाइदिन्छन् ? जनता जाग्न आवश्यक छ । पार्टी जिम्मेवार हुन पनि आवश्यक छ । नेकपा एमाmेका अध्यक्षलाई यही मञ्चबाट आग्रह गर्न चाहन्छु । सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । देशलाई निकास दिन निर्वाचन आवश्यक छ । काठमाण्डुका विभिन्न मञ्चबाट कुर्लंदै नेकपा एमालेका अध्यक्षले भन्नुभएको छ । यो संशोधन प्रस्ताव पारित भयो भने यो भन्दा ठूलो राष्ट्रघात अरु केही पनि हुँदैन । म एउटा कुरा मात्र स्मरण गराउन चाहन्छु संविधानसभामा रेकर्ड छ, मैले बोलेको होइन, तथ्य आफैं बोल्छ ।
सरकारले संसदमा नेपालको जुन नसक्दा दर्ता गराएको छ । त्यो नक्सामा न पुष्पकमल दाहालले बनाउनुभएको नक्सा हो, न शेरबहादुर देउवाले बनाउनुभएको नक्शा हो । सदनमा संविधानमासभा अहिले पनि रेकर्ड छ । केपी ओलीले हिजो बनाएर बुझाउनुभएको नक्शा आज फोटोकपी गरेर बाँड्दै गर्दा हामी राष्ट्रघाती हुने ? त्यही नक्शा हिजो पेस गर्ने केपी ओली नेपालको सबैभन्दा ठूलो राष्टन्वादी हुने ? आज उभिएर काँग्रेसका मानिसहरुले बोल्न सक्ने कि नसक्ने ? प्रश्न गर्न सक्ने कि नसक्ने ? प्रश्न सिके राउतको उठ्यो । सिके राउतसँग कोही डराउनुपर्दैन । सरकारले डराएर गिरफ्तार गरेको पनि होइन । बढी हल्ला गर्न थाल्यो, उत्ताउलो भयो भनेर केही दिनका लागि लिएर आएको हो । सिके राउतसँग काठमाण्डुका युवाहरुले देखाइदिन्छु भन्नु पनि पर्दैन । मधेसमै हाम्रा तन्नेरीहरु छन् । राष्ट्रवादी मधेसका तन्नेरीहरुले यत्रो वर्ष नेपालको सिमाना जोगाएर राखे । नेपालको विखण्डनको कुरा गर्ने सिके राउतलाई तह लगाउन मधेसकै तन्नेरीहरु काफी छन् । हाम्रा मधेसी साथीहरु नै काफी छन् । हामीले बरु चिन्ता के गर्नुपरेको छ भने काठमाण्डुमा चिटिक्क परेको दारा सुरवाल टोपी लगाएर कालो चश्मा लगाएर चोर औला मधेसतिर देखाएर यी विखण्डनकारीहरुका कारण नेपालको राष्ट्रियता खतरामा प¥यो भन्नेहरुका कारणले गर्दा बरु नेपालमा विखण्डनको हावा चल्न थालेको छ । यिनको मुख बन्द गर्नुपर्ने बेला आएको छ । निजको बीचमा उभिएर भन्नुपर्ने बेला आएको छ, नेपाल सबैको हो । मधेसमा बस्नेको पनि हो । पहाडमा बस्नेको पनि हो । हिमालमा बस्नेको पनि हो । हामी सयभन्दा बढी जातिका मानिसहरु छौं । थरीथरी भाषा बोल्नेहरु छों ।
हामी सबैको एकता मात्रै नेपालको सबैभन्दा ताकत हो । कसैले भारत देखाएर तर्साउनु पर्दैन । कसैले चीन देखाएर तर्साउनु पर्दैन । कसैले फकाउनु पनि पर्दैन । हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ भारत र तीन दुई उदाउँदा महाशक्तिहरु हुन् । तिनलाई धेरै जिस्काउनु हुँदैन । तिनको चित्त धेरै दुखाउनु हुँदैन । तर, सँगसँगै उभिएर भन्न सक्नुपर्छ चित्त तिम्रो मात्र छैन, चित्त हाम्रो पनि छ । तिम्रो चित्त हामी दुखाउँदैनौ. । तर हाम्रो चित्त दुखाउने अधिकार पनि कसैलाई छैन । यो भन्ने हिम्मत राख्न सक्नुपर्छ । अँध्यारो कोठामा गएर छोराछोरीका निम्ति लम्पसार परेर छात्रवृत्ति मागेर बस्ने, अँध्यारो कोठामा गएर मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा छात्रबास बनाइदेऊ भनेर मागेर बस्ने अनि मञ्चमा आएर नेपालको राष्ट्रियता खतरामा छ भनेर कुर्लिएर बस्ने । जनतालाई जहिले पनि बराल्ने यो कुरालाई पनि बुझ्न आवश्यक छ । म नेपाली काँग्रेसका सम्पूर्ण साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । खास गरीकन नेपाली काँग्रेस काठमाण्डुका साथीहरुलाई । हामी काँग्रेसका सदस्य हौं । त्यसमाथि हामी काठमाण्डुका नागरिक पनि हौं । हामी राजधानीबासी हौं । हामी राजधानीबासी भएको कारणले गर्दा हामीले बढी सुविधा पाएका छौं । हामीले बढी अधिकार पनि पाएका छौं । हाम्रो जिम्मेवारी पनि बढी छ । आज यही काठमाण्डुलाई केन्द्र बनाएर जसरी नेपालमा गलत ढंगबाट विखण्डनको हावा चलाउन खोजिएको छ, राष्ट्रियताको ढोंग पिटिएको छ । अब काठमाण्डुले यो निर्वाचनबाट जवाफ फर्काउनुपर्छ । काठमाण्डुले निर्वाचनको मतपेटिकाबाट जवाफ फर्काउनुपर्छ हामीलाई कसैले सिकाउनुपर्र्दैन । हामीलाई कसैले पढाउनुपर्दैन । यो काठमाण्डुले सिंगो नेपाललाई सन्देश दिन सक्नुपर्छ । त्यसैले नेपाली काँग्रेसका साथीहरुले कुने पनि हीनताबोध नराखीकन यो मञ्चमा शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, यो मञ्चमा प्रकाशमान सिंह हुनुहुन्छ । आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभएको छ । आज लाग्छ पार्टीका कुनै सदस्यका लागि पार्टीले एउटा सरकार पाउनका निम्ति ।
एउटा मन्त्री पाउनका निम्ति ५ महिना, ६ महिना सरकारमा बस्ने कुराका निम्ति नेपाली काँग्रेस यो राष्ट्रको माटोसँग कुने घात गर्लाजस्तो नेपाली काँग्रेसका साथीहरुलाई लाग्छ ? यो नेपालको प्रतिष्ठासँग घात गर्ला भन्ने कोही साथीलाई लाग्छ ? त्यसो भए हिनताबोध केका लागि ? आत्मविश्वासका साथमा काँग्रेसका साथीहरुले छाती ठोकेर भन्नुस् । किनकी काँग्रेसले जिम्मेवारी पुरा गर्दैगर्दा हो जिम्मेवारीको भारी बोक्दै गर्दा कहिले काहीं हामी थाकेका जस्ता देखिन्छौं । हामी थाकेका होइनौं भारी धेरै गहु्रँगो भयो । कसैलाई बोल्दिए पुग्छ, कसैलाई हप्काइदिए पुग्छ । यो भएन भनिदिए पुग्छ । तर काँग्रेसलाई बोलिदिएर मात्र पुग्दैन । काँग्रेसले गर्नुपर्छ । संविधानसभामा आयो, संविधान बनायो । अब अहिले कसैकसैलाई निर्वाचन चाहियो भनिदिए पुग्छ । कसैलाई चाहिएन भनिदिए पुग्छ । काँग्रेसले चाहियो र चाहिएन भनेर सुख पाउँदैन । हामीलाई निर्वाचन गराउनुछ । एमालेलाई पनि सम्हाल्नुछ । मधेसका दललाई पनि सम्हाल्नुछ । सरकारमा बसेको माओवादीलाई पनि सम्हाल्नुछ । जेठाबाठो त्यसै हुन पाइँदैन । सबैलाई सम्हालेर फकाएर लिएर जानुपर्नेछ । त्यो जिम्मेवारी नेपाली काँग्रेसले पुरा गर्छ । त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका निम्ति काँग्रेसको ताकत सिंहदरबार होइन । काँग्रेसको ताकत शीतलनिवास होइन । काँग्रेसको ताकत बालुवाटार होइन । सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली काँग्रेसको ताकत देशभरी रहेका पार्टीका हामी साथीहरु हौं । हामीमा आत्मविश्वास छ । हाम्रो आत्मविश्वास नै पार्टीको शक्ति हो । यो शक्ति नेपाली काँग्रेसले प्रयोग गरेर नेपाललाई निकास दिन्छ । वैशाखको मसान्तसम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ । कोही कुनै अलमलमा नपर्नुहोला । निर्वाचनको तयारी गर्नुस । काठमाण्डु जिल्लामा आठ निर्वाचन क्षेत्रमा काँग्रेसले चार तारे झण्डा ठड्यायो । यो पटक पनि सबै नगरपालिकामा, महानगरपालिकामा काँग्रेसले चारतारे झण्डा फरफराउँछ ।
(स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका काँग्रेसले नेता थापाले राजधानीमा भएको काँग्रेसको चुनावीसभामा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
ओलीले बोलाएको बैठक छाडेर प्रचण्ड निवास पुगे गृहमन्त्री बादल
पार्टीभित्रको विवाद छलफलबाटै समाधान हुन्छः ओली
भारतबाट सलहको ठूलो झुण्ड नेपाल पस्दै
भारतीय गुण्डा नाइके दुवेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर गोली हान्यो
ज्योतिष दाबी गर्ने अर्जुन क्षेत्री ठगी आरोपमा पक्राउ